Soo dejisan G2A 1.0.4 – Vessoft
Soo dejisan G2A
G2A – software ah la tiro badan oo ah kulan iyo waxyaabaha ciyaaraha ka dukaanka G2A caanka online. software waxay leedahay qaybaha kala duwan oo kuu ogolaanaya in aad si aad u raadiso kulan by nooca, madal ama kala duwan qiimaha. G2A bandhigayaa sharaxaad faahfaahsan ee alaabta digital sanamyadooda iyo shuruudaha nidaamka talinayaa. software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto ku dhufto ee ganacsiga laga heli by qiimaha iyo rating. Sidoo kale G2A ku jira shaqo ee ilaalinta in ay hubisaa in iibka ammaan ah ama soo celiyo in ay dhacdo muhiim ah ay hawshooda u khaldan.
Tiro balaadhan oo ah kulan iyo waxyaabaha la socda
qeybinta haboon galay qaybaha kala duwan
dalabyada soo jiidasho leh ka soo dhufto ee ganacsiga
gadashada Secure ama soo celiyo
Comments on G2A:
G2A Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... Megapolis 2.21
English, Deutsch, 中文, Русский... Hay Day 1.29.98
العربية, English, Français, Español... Hola 1.10.199